मेरो आईफोनको स्टोर किन काम गरिरहेको छैन वा खाली छ? यहाँ समाधान छ! - अन्य
मेरो आईफोन screen स्क्रिन कालो भयो र बन्द छैन
के आईफोन मा डाटा को उपयोग गर्दछ
iphone मा पाठ पठाउन सक्दैन
किन मेरो आईफोन एक्स ग्लिचिंग छ
मेरो आईफोनको स्टोर किन काम गरिरहेको छैन वा खाली छ? यहाँ समाधान छ!
Por Qu La App Store De Mi Iphone No Funciona O Est En Blanco
तपाईंले भर्खरै एक नयाँ नयाँ अनुप्रयोगको बारेमा सुन्नुभयो र यसलाई प्रयोगको लागि तयार हुनुहुन्छ, तर जब तपाईं यसलाई डाउनलोड गर्न अनुप्रयोग स्टोर खोल्नुहुन्छ, स्क्रिन खुला छ। सेतो वा लोडमा अड्किन्छ । तपाइँ निश्चित हुनुहुन्छ कि यो हार्डवेयर समस्या होइन, किनभने अन्य सबै अनुप्रयोगहरू पूर्ण रूपमा काम गर्दछन्, त्यसैले यो केहि अरू हुनुपर्दछ। यस लेखमा, म तपाईंलाई व्याख्या गर्नेछु किन आईफोन अनुप्रयोग स्टोर काम गरिरहेको छैन वा खाली छ , Y कसरी समस्या समाधान गर्ने ताकि एप स्टोर तपाईंको आईफोन, आईप्याड वा आइपडमा फेरि लोड हुन सुरू गर्दछ ।
समाधान: के गर्ने जब अनुप्रयोग स्टोरले तपाईंको आईफोन, आईप्याड वा आइपडमा काम गरिरहेको छैन
म यो ट्यूटोरियलको लागि आईफोन प्रयोग गर्दैछु, तर आईप्याड र आईपडमा अनुप्रयोग स्टोर ठीक गर्न प्रक्रिया ठीक उस्तै हो। यदि तपाईंसँग आईप्याड वा आईपड छ भने, स्वतन्त्र महसुस गर्नुहोस् तपाईंको उपकरणलाई हरेक पल्ट बदल्नुहोस् जब तपाईं यो देख्नु हुन्छ आईफोन यस लेखमा।
अनुप्रयोग स्टोर बन्द गर्नुहोस् र खोल्नुहोस्
कहिलेकाँही अनुप्रयोग स्टोरसँग सानो ग्लिचहरूले यसलाई इन्टरनेटमा जडान हुनबाट रोक्न सक्छ र जब यो हुन्छ यो बिल्कुल लोड हुँदैन। तपाईंले प्रयास गर्नु पर्ने पहिलो कुरा भनेको एप स्टोर अनुप्रयोग बन्द गरेर फेरि खोल्नु हो।
अनुप्रयोग स्टोर बन्द गर्न, गर्नुहोस् स्टार्ट बटनमा दुई पटक क्लिक गर्नुहोस् तपाईंको आईफोनमा अनुप्रयोग चयनकर्ता खोल्नको लागि। यदि तपाईंको आईफोनसँग होम बटन छैन भने, तलबाट स्क्रिनको बीचमा स्वाइप गर्नुहोस्। स्क्रिनको बीचमा आफ्नो औंला राख्नुहोस् अनुप्रयोग लन्चर खुल्दा सम्म।
तपाईको आईफोनमा खोलिएका सबै अनुप्रयोगहरू हेर्न तपाई पछाडि र पछि स्लाइड गर्न सक्नुहुनेछ। जब तपाइँ अनुप्रयोग स्टोर फेला पार्नुहुन्छ, तपाइँको औंलालाई यसमा प्रयोग गर्नुहोस् स्क्रिनको माथि स्लाइड गर्नुहोस् । सबै अनुप्रयोगहरू बन्द गर्न यो खराब विचार होइन, केवल फरक क्र्यासको अवस्थामा।
आईफोनमा अनुप्रयोगहरू बन्द गर्ने बारे
म तपाइँको सबै अनुप्रयोगहरु दिन मा एक वा दुई पटक बन्द गर्न सिफारिस गर्दछु, किनकी तपाईले जे सुन्नुभयो, यो छ तपाईंको आईफोन ब्याट्री जीवन को लागी राम्रो छ। यदि तपाईं अधिक जानकारीमा रुचि राख्नुहुन्छ भने, हाम्रो लेख पढ्नुहोस् जुन प्रदर्शन गर्दछ किन तपाईको आईफोन अनुप्रयोगहरू बन्द गर्नु वास्तवमै राम्रो विचार हो , र अधिकको लागि हाम्रो भिडियो जाँच गर्नुहोस् आईफोन ब्याट्री सल्लाह ।
आईफोन मा डाटा रोमि के हो
धेरै मानिसहरूलाई यो कसरी गर्ने भनेर थाहा छैन, तर App Store क्यास खाली गर्दा तपाईंको आईफोनमा अनुप्रयोग स्टोरको साथ सबै प्रकारका समस्याहरू समाधान गर्न सकिन्छ। अनुप्रयोग स्टोर क्यास खाली गर्न, App Store स्क्रिनको तल कुनै ट्याब आइकनमा १० पटक ट्याप गर्नुहोस्।
उदाहरणको लागि, तपाईं ट्याबमा १० पटक ट्याप गर्न सक्नुहुनेछ आज क्यास खाली गर्न। App Store पुन: लोड हुँदैन, त्यसैले कृपया बन्द गर्नुहोस् र पछि एप स्टोर खोल्नुहोस्।
एप्पलको प्रणाली स्थिति पृष्ठ जाँच गर्नुहोस्
एप स्टोरले तपाईंको आईफोनमा एप्पलको सर्भरहरूमा समस्याको कारण काम नगर्न सक्छ। जाँच गर्नुहोस् एप्पल प्रणाली स्थिति पृष्ठ र निश्चित गर्नुहोस् डटहरू हरियो छन्, विशेष गरी पहिलो एप स्टोरको छेउमा।
यदि यो पोइन्ट वा अरू धेरैहरू हरियो छैन भने, एप्पलले केहि समस्याहरू अनुभव गर्दैछ र तपाईको आईफोनमा केही गलत छैन। एप्पलले सामान्यतया यी मुद्दाहरूलाई पर्याप्त चाँडै समाधान गर्दछ, त्यसैले धैर्य हुनु राम्रो हुन्छ र पछि फेरि जाँच गर्नुहोस्।
तपाईंको मिति र समय सेटिंग्स जाँच गर्नुहोस्
यदि तपाईंको आईफोनको मिति र समय सेटिंग्स सही सेट गरिएको छैन भने, यसले तपाईंको आईफोनमा सबै प्रकारका समस्याहरू निम्त्याउन सक्छ - यो समावेश सहित! सेटिंग्स खोल्नुहोस् र ट्याप गर्नुहोस् सामान्य । त्यसपछि ट्याप गर्नुहोस् मिति र समय र निश्चित गर्नुहोस् कि स्विच स्वचालित रूपमा सेट भएको छ।
तपाइँको इन्टर्नेट जडान जाँच गर्नुहोस्
जब App Store लोड हुँदैन, जाँच गर्न अर्को चीज भनेको तपाईको आईफोनको इन्टरनेटमा जडान। यदि अन्य अनुप्रयोगहरू वा वेबसाइटहरू तपाईंको उपकरणमा काम गर्दछन् भने, यसलाई प्रयास गर्नुहोस्। अनुप्रयोग स्टोरले अन्य अनुप्रयोगहरू र वेबसाइटहरू भन्दा फरक प्रविधि प्रयोग गर्दछ - हामी त्यस पछि कुरा गर्नेछौं।
यदि तपाईंसँग पहिले नै वाइफाइ छ भने, हामी त्यसलाई बन्द गर्नेछौं र फेरि अनुप्रयोग स्टोर खोल्नेछौं यदि यसले कार्य गर्दछ भने। जब तपाईं वाइफाइ बन्द गर्नुहुन्छ, तपाईंको आईफोनले तपाईंको वायरलेस डाटा जडानमा स्विच गर्दछ, जुन तपाईंको वायरलेस सेवा प्रदायक र संकेत शक्तिमा निर्भर गर्दै, LTE, TE जी, 3G जी, वा G जी कहलाउन सकिन्छ।
यदि तपाईंको आईफोन वाई-फाईसँग जोडिएको छैन भने हामी एक फरक वाइफाइ नेटवर्कमा जडान गर्नेछौं र फेरि एप स्टोर खोल्नेछौं।
कसरी तपाइँको आईफोनको इन्टर्नेट जडान जाँच्न
तपाईको आईफोनको इन्टरनेटमा जडान परीक्षण गर्न सजिलो छ। पहिले, खोल्नुहोस् सेटिंग्स र छुनुहोस् वाइफाइ ।
तपाईं स्क्रीनको शीर्षमा Wi-Fi पछि अर्को स्विच देख्नुहुनेछ। यदि स्विच हरियो छ (वा मा), तब तपाईंको आईफोन जब वा सम्भव भए वाइफाइ नेटवर्कमा जडान हुँदैछ। यदि स्विच खैरो छ (वा निस्क्रिय) छ भने, तपाईंको आईफोनले कहिले पनि वाइफाइसँग जडान गर्दैन र तपाईंको सेल फोन योजना मार्फत मोबाइल डाटा प्रयोग गरेर इन्टरनेटमा मात्र कनेक्ट हुनेछ।
तपाईंको आईफोन केवल वाइफाइ नेटवर्कमा मात्र जडान गर्दछ यदि यसले उनीहरूसँग विगतमा जडान गरेको छ भने, यो कहिल्यै 'केवल जडान' हुने छैन आफ्नै Wi-Fi नेटवर्कमा।
यदि तपाईं आफ्नो मासिक डाटा भत्ता तपाईंको वायरलेस सेवा प्रदायकको साथ पार गर्नुभयो भने, यो हुन सक्छ समस्या हुन सक्छ: हाम्रो लेख शीर्षक हेर्नुहोस् आईफोनमा डाटाले के प्रयोग गर्दछ? अधिक जानकारी, वा जाँचको लागि योजना तुलना उपकरण अधिक डाटाको साथ उत्तम सेल फोन योजना फेला पार्न अपफोनबाट।
बन्द गर्न वाइफाइको छेउमा स्विच ट्याप गर्नुहोस्। फेरि स्विच ट्याप गर्नुहोस् वाई-फाई फिर्ता खोल्नको लागि, त्यसपछि तपाईंको आईफोन जडान गर्न चाहानुहुन्छ नेटवर्कको ट्याप गर्नुहोस्।
मलाई कसरी थाहा छ यदि मेरो आईफोन पहिले नै वाइफाइसँग जडित छ?
यदि तपाईले निलो चेक मार्क Wi-Fi नेटवर्कको छेउमा देख्नुभयो भने, तपाईको आईफोन त्यस नेटवर्कमा जोडिएको छ।
बन्द गर्नुहोस् र तपाईंको आईफोन खोल्नुहोस्
कहिलेकाँही साधारण समस्याहरू तपाईंको आईफोन बन्द गरेर फेरि सच्याउन सकिन्छ। यो गर्न, थिच्नुहोस् र पावर बटन होल्ड गर्नुहोस् (स्लीप / वेक बटन भनिन्छ) स्क्रिनमा 'स्लाइड टु पावर अफ' देखा पर्दासम्म। यदि तपाइँसँग फेस आईडी भएको आईफोन छ भने थिच्नुहोस् र समाउनुहोस् साइड बटन र कुनै पनि भोल्यूम बटनहरू 'स्लाइड अफ पावर अफ' देखा पर्दा सम्म।
तपाईंको आईफोन अफ गर्न स्क्रिनमा पावर आइकनको साथ सर्कल स्लाइड गर्नुहोस्। यसले तपाईंको आईफोन पूर्ण रूपमा बन्द गर्न seconds० सेकेन्ड लिन सक्दछ।
तपाईंको आईफोनलाई फेरि खोल्नको लागि थिच्नुहोस् र पावर वा साइड बटन होल्ड गर्नुहोस् जबसम्म एप्पल लोगो पर्दामा देखा पर्दैन। यो काम गरिरहेको छ कि छैन हेर्नका लागि फेरि App Store खोल्नुहोस्।
तपाईंको आईफोन अपडेट गर्नुहोस्
तपाईंको आईफोन अपडेट गर्नाले सफ्टवेयर समस्या समाधान गर्न सकिन्छ जुन एप स्टोरलाई ठीकसँग काम गर्नबाट रोक्दै छ। सेटिंग्स खोल्नुहोस् र ट्याप गर्नुहोस् सामान्य> सफ्टवेयर अपडेट । टच डाउनलोड र स्थापना गर्नुहोस् वा अब स्थापना गर्नुहोस् यदि एक अद्यावधिक उपलब्ध छ।
तपाईको आईफोन अद्यावधिक पछि, अनुप्रयोग स्टोर खोल्नुहोस् र जाँच गर्नुहोस् कि समस्या ठीक छ कि छैन। अर्को चरणमा जारी राख्नुहोस् यदि App Store अझै खाली छ वा काम गरिरहेको छैन।
App Store बाट साइन आउट गर्नुहोस् र पुन: प्रविष्ट गर्नुहोस्
कहिलेकाँही अनुप्रयोग स्टोर लोड गर्न समस्याहरू तपाईंको एप्पल आईडीको साथ लग आउट र लग ईन गरेर समाधान गर्न सकिन्छ। तपाईं सोच्दै हुन सक्नुहुनेछ कि कसरी सक्षम हुनु भए तपाईं अनुप्रयोग स्टोरबाट लग आउट गर्न सक्नुहुन्छ Enterokay App Store मा, तर यो सजिलो छ - यी साधारण चरणहरू अनुसरण गर्नुहोस्:
पहिले, खोल्नुहोस् सेटिंग्स र स्क्रिनको शीर्षमा तपाईंको नाम ट्याप गर्नुहोस्। तल स्क्रोल गर्नुहोस् र ट्याप गर्नुहोस् बाहिर निस्कौं ।
अब तपाईले लग आउट गर्नु भएको छ, फेरि लग ईन गर्ने समय आएको छ। बटन ट्याप गर्नुहोस् लग - इन छ तपाईंको एप्पल आईडी र पासवर्ड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
मेरो फोनको ब्याट्री किन छिटो हराउँछ?
सुनिश्चित गर्नुहोस् कि 80० र3443 पोर्टहरू खुला छन्
म यहाँ धेरै टेक्निकल हुने छैन, तर यो पर्याप्त छ कि तपाईंको आईफोनले इन्टरनेट जडान गर्न धेरै पोर्ट प्रयोग गर्दछ। यस अनुसार एप्पल पोर्टहरूको आधिकारिक सूची जुन प्रयोग गर्दछ , पोर्ट and० र3443 ती दुई पोर्टहरू हुन् जुन अनुप्रयोग स्टोर र आईट्यून्समा जडान गर्न प्रयोग गर्छन्। यदि यी पोर्टहरू मध्ये कुनै एकलाई रोकिएको छ भने, App Store लोड हुन सक्दैन।
पोर्ट खुला छ कि छैन भनेर कसरी जाँच गर्ने?
यदि तपाईं उही आईफोनमा यस लेखलाई पढ्दै हुनुहुन्छ भने तपाईंलाई पोर्ट 80० ले ठीक काम गर्दछ, किनकि तपाईंको आईफोनले पोर्ट 80० प्रयोग गरेर payetteforward.com मा जडान गर्दछ। port 443 जाँच गर्न, जानुहोस् गूगल । यदि यो लोड भयो भने, पोर्ट3443 राम्रो काम गर्दछ। यदि एक वा अन्य लोड हुँदैन भने, सेक्सन सेटि Settingsहरू तल रिसेट नेटवर्क भनिन्छ।
तपाईंको वाइफाइ नेटवर्क बिर्सनुहोस्
तपाईंको Wi-Fi नेटवर्क बिर्सनु भयो भने तपाईंको आईफोन नेटवर्कमा पूर्ण नयाँ कनेक्शन स्थापित गर्न अनुमति दिनेछ। जब तपाईं पहिलो पटक तपाईंको आईफोनलाई वाइफाइ नेटवर्कमा जडान गर्नुहुन्छ, यसले कसरी त्यो नेटवर्कमा जडान गर्ने बारेमा जानकारी भण्डारण गर्दछ। नेटवर्क बिर्सनु भएमा तपाईंको आईफोनलाई स्क्र्याचबाट नेटवर्कमा जडान गर्न मौका दिनेछ, जसले जडान समस्या समाधान गर्न सक्दछ।
सेटिंग्स खोल्नुहोस् र ट्याप गर्नुहोस् वाइफाइ । तपाईंको Wi-Fi नेटवर्कको दाँयामा निलो सूचना आइकन 'i' छुनुहोस्, तब छुनुहोस् यो नेटवर्क बिर्सनुहोस् । टच बिर्सनु तपाईंको निर्णय पुष्टि गर्न।
सेटिंग्समा फिर्ता जानुहोस् -> वाइफाइ र तपाईंको नेटवर्कमा ट्याप गर्नुहोस् अन्य नेटवर्कहरू । नेटवर्कमा पुन: कनेक्ट गर्न तपाईंको Wi-Fi पासवर्ड पुन: प्रविष्ट गर्नुहोस्।
यदि App Store अझ पनी तपाइँको आईफोनमा काम गर्दैन भने, नेटवर्क सेटिंग्स रिसेट गर्ने समय आयो। नेटवर्क सेटि settingsहरू रिसेट गर्दै तपाईंले कहिल्यै जडान गर्नुभएको सबै Wi-Fi नेटवर्कहरू 'बिर्सन्छ', त्यसैले तपाईंको घर वाइफाइ नेटवर्कमा पुन: जडान गर्न नबिर्सनुहोस्। सेटिंग्स -> वाइफाइ तपाईंको आईफोन पुनःस्टार्ट पछि। यस रिसेटले सबै मोबाइल डाटा, ब्लुटुथ, र VPN सेटि factoryहरूलाई कारखाना पूर्वनिर्धारित मानहरूमा पुनर्स्थापना गर्दछ। नेटवर्क सेटिंग्स रिसेट गर्नु कुनै जादुई बुलेट होईन, तर यसले आईफोनमा धेरै इन्टरनेट कनेक्टिभिटी मुद्दाहरू समाधान गर्दछ।
तपाईंको आईफोनमा नेटवर्क सेटिंग्स रिसेट गर्न, खोल्नुहोस् सेटिंग्स र छुनुहोस् सामान्य -> ​​रिसेट -> नेटवर्क सेटिंग्स रिसेट गर्नुहोस् । तपाईंको आईफोन पासवर्ड प्रविष्ट गर्नुहोस्, त्यसपछि ट्याप गर्नुहोस् नेटवर्क सेटिंग्स रिसेट गर्नुहोस् फेरि रिसेट पुष्टि गर्न।
तपाईको आईफोनको जगेडा गर्नुहोस्
अर्को समस्या निवारण चरणमा जानु अघि हामी तपाईंलाई सिफारिश गर्दछौं कि तपाईको आईफोनको जगेडा राख्नुहोस्। ब्याकअप भनेको तपाईंको आईफोनमा सबै डाटाको प्रतिलिपि हो, तपाईंको सम्पर्कहरू, फोटोहरू, र अनुप्रयोगहरू सहित। तपाईको आईफोनको जगेडा गर्नका लागि तीन बिभिन्न तरिकाहरू छन्, र हामी तपाईंलाई तल प्रत्येक विधिमा हिंड्ने छौं।
आईक्लाउडमा तपाईको आईफोनको जगेडा गर्नुहोस्
खुल्छ सेटिंग्स ।
प्रेस आईक्लाउड ।
टच ब्याकअप प्रतिलिपि ।
निश्चित गर्नुहोस् कि आईक्लाउड ब्याकअपको छेउमा स्विच हरियो छ, यो स indic्केत गर्दै।
प्रेस आहिले संचित गर ।
नोट: आईफोन क्लाउडमा ब्याक अप गर्नको लागि तपाईको आईफोन वाइ-फाइसँग जोडिएको हुनुपर्दछ।
ITunes मा तपाइँको आईफोनको जगेडा गर्नुहोस्
यदि तपाईंसँग म्याकोस १०.१4 वा अघिल्लो पीसी वा म्याक छ भने, तपाईं आईट्यून्स प्रयोग गर्नुहुनेछ जब तपाईं आफ्नो आईफोन आफ्नो कम्प्युटरमा ब्याक अप गर्नुहुन्छ।
चार्जिंग केबलको साथ तपाईंको कम्प्युटरमा तपाईंको आईफोन जडान गर्नुहोस्।
तपाईंको पीसी वा म्याकमा आईट्यून्स खोल्नुहोस्।
आईट्यून्सको शीर्ष बायाँ कुनामा आईफोन आईकनमा क्लिक गर्नुहोस्।
खुल्ला ब्याकअप , अर्को सर्कलमा क्लिक गर्नुहोस् यो कम्प्युटर र अर्को बक्समा इन्क्रिप्ट आईफोन बैकअप ।
यदि प्रोम्ट गरियो भने, ब्याकअप ईन्क्रिप्ट गर्न तपाईको कम्प्युटर पासवर्ड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
थिच्नुस आहिले संचित गर ।
फाइन्डरमा तपाईको आईफोनको जगेडा गर्नुहोस्
यदि तपाईंसँग म्याकोस १०.१5 वा नयाँको साथ म्याक छ भने, तपाईं आफ्नो कम्प्युटरमा तपाईंको आईफोन ब्याक अप गर्दा फाइन्डर प्रयोग गर्नुहुनेछ।
चार्जिंग केबलको साथ तपाईको आईफोनलाई तपाईको म्याकमा जडान गर्नुहोस्।
तपाईंको आईफोनमा क्लिक गर्नुहोस् स्थानहरू फाइन्डरको बाँया पट्टि।
अर्को सर्कलमा क्लिक गर्नुहोस् यस म्याकमा तपाईंको सबै आईफोन डाटाको जगेडा गर्नुहोस् ।
बक्सलाई अर्को जाँच गर्नुहोस् स्थानीय बैकअप ईन्क्रिप्ट गर्नुहोस् र तपाईको म्याक पासवर्ड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
DFU तपाईंको आईफोन पुनर्स्थापना गर्नुहोस्
एक DFU पुनर्स्थापना अन्तिम चरण हो जुन तपाईले सफ्टवेयर समस्यालाई पूर्ण रूपमा रद्द गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईको आईफोनमा सबै कोडहरू मेटेर पुनः लोड गरिएको छ, लाइन बाट लाइन। । जब पुनःस्थापन पूरा हुन्छ, यो यस्तो हुनेछ मानौं तपाईं आफ्नो आईफोन पहिलो पटक बाकस बाहिर लिइरहनु भएको छ।
निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंसँग आईफोन ब्याकअप छ यो कदम गर्नु अघि! एक जगेडा बिना, तपाईं आफ्नो आईफोनमा भण्डारण सबै जानकारी गुमाउनु हुनेछ। जब तपाईं तयार हुनुहुन्छ, हाम्रो लेख जाँच गर्नुहोस् कसरी एक DFU आफ्नो आईफोनमा पुनःस्थापना गर्न ।
अनुप्रयोग स्टोरले काम नगरेको बेला एप्पलबाट मद्दत कसरी पाउने
मेल वा सफारी अनुप्रयोग खोल्नुहोस् र वेब प्रयोग गर्न प्रयास गर्नुहोस्। के तपाईं वेबसाइटहरू नेभिगेट गर्न सक्नुहुनेछ वा तपाईंको ईमेल डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ? यदि तपाईंले माथिका सबै चरणहरू अनुसरण गर्नुभयो र इन्टरनेटले काम गर्यो भने, त्यहाँ .9 99..9% संभावना छ कि समस्या सफ्टवेयरसँग सम्बन्धित छ। प्राप्त गर्नका लागि उत्तम स्थान एप्पल सफ्टवेयर को साथ मद्दत एप्पल हो ।
यदि तपाईको आईफोनले हालसालै अनौंठो वा खराब गरीरहेको छ र अनुप्रयोग स्टोरले काम गरिरहेको छैन भने, केहि अरु भइरहेको हुन सक्छ। तपाईको उत्तम विकल्प हो एप्पल वेबसाइटको भ्रमण गर्नुहोस् एप्पल टेक्नीशियनहरूसँग भेट्ने समय तालिका मिलाउन वा तिनीहरूको मेल-मर्मत मर्मत सेवा प्रयोग गर्न।
आईफोन अनुप्रयोग स्टोर: फेरि काम गर्दै!
हामीले देख्यौं, त्यहाँ छ धेरै आईफोन अनुप्रयोग स्टोरले काम नगर्न सक्दो कारणहरू, तर थोरै धैर्यताका साथ म निश्चित छु कि तपाईंले यसलाई ठीक गर्न सक्नुहुन्छ। एप्पल कर्मचारीहरु सुन्न: 'मेरो अनुप्रयोग स्टोर खाली छ!' सबै समय, र हामीले चर्चा गरेकै अनुसार यो एक सफ्टवेयर समस्या हो जुन समयको% 99% हो। अब म तपाइँको अनुभवबाट जान्न चाहन्छु: कुन समाधानले अनुप्रयोग स्टोरलाई तपाइँको आईफोनमा पुनः लोड गर्न सुरू गर्यो? हामीलाई टिप्पणी सेक्सनमा थाहा दिनुहोस्।